'भाउजू सांसद' एमालेमा फर्केपछि ६६ लाखको हिसाब - Jana Aastha News Online Jana Aastha News Online
‘भाउजू सांसद’ एमालेमा फर्केपछि ६६ लाखको हिसाब
प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७८, शनिबार १४:००
लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तनको खेल हुनै लाग्दा माओवादीको पक्षमा खुलेकी एमाले सांसद विमलाकुमारी वली (भाउजू सांसद) ले एकाएक कित्ता फेरिकी छन् । उनी माओवादी नेताहरूलाई जिल्ल पार्दै एमालेमै फर्किएपछि कुलप्रसाद केसीलाई झन् तनाव थपिएको छ ।
केसीकाे मुख्यमन्त्री पद मुखैमा परेको बेला सांसद विमलाले समूह फेरेकी हुन् । उनी नेकपा–ताका श्रीमान उत्तरकुमार वलीको ठाउँमा सांसद बनेकी हुन् । सांसद वलीले दुई महिनाअघि केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै माओवादी खेमा प्रवेश गरेकी थिइन् । तर एमाले नेताहरूले भने सूर्य छापकै सांसद भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
एमालेकै आँगनमा हुर्किएकी उनी किन दुई महिनाअघि एकाएक माओवादी भइन् ? उनको दुःख कल्ले बुझ्ने? श्रोतका अनुसार बिमलाको कथा लामो छ । उनका श्रीमान कुनै समय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका ‘दाहिने हात’ मानिन्थे । उत्तरको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उप–चुनाव जितेकी उनी कहिले माओवादी त,कहिले एमालेतिर वरपर गरिरहेकी छन्।
“उप–चुनाव लड्दा लगाएको ऋणको भारी उस्तै छ । श्रीमानले पनि ऋणमाथि ऋण थपिदिएका छन् । तर सांसद जितेपछि सोधेन एमालेले,सुनेनन् मुख्यमन्त्रीले।”
उप–चुनाव लड्दा लगाएको ऋणको भारी उस्तै छ । श्रीमानले पनि ऋणमाथि ऋण थपिदिएका छन् । तर सांसद जितेपछि सोधेन एमालेले,सुनेनन् मुख्यमन्त्रीले। ‘धन बिनाको मन ठूलो कि,मन बिनाको धन’भने झैं सांसद वली सोच्दै थिइन् टुप्लुक्क आइपुगे भगवानरुपी माओवादीहरू । सत्ताको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सहयोगको बाचा गर्दै बुटवलस्थित सांसदहरू थुनिराखेको होटलसम्मै पुर्याए। उनलाई एमाले छाड्न लगाउने ‘ठेकेदार कमरेड’ले भने, ‘भोट हाम्लाई,पैसा तपैलाई’। आखिर मनै न हो विमलाले पनि भनिदिइन्,हवस् ।
होटलमा सांसदहरूको औँला गन्दै बसेकी थिइन्,पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र सांसद सुदर्शन बराल । उनीहरूको छेउमै पुगी ‘ठेकेदार कमरेड’ले भने,‘शंकरको निवासबाटै भाउजूलाई ल्याएँ थुतेर,अब पैसा चाहियो ? माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने पक्का।’ कुलप्रसाद हतार–हतार ओनसरी र सुदर्शन कहाँ पुगी खासखुस मात्रै गरेका थिए, विमलाले ६६ लाख पाउने पक्का भो…।
यसरी दुई महिनाअघि विमलालाई माओवादीमा भित्र्याउन माओवादी नेत्री ओनसरीसहित सुदर्शनले ६६ लाख खर्च गरेको चर्चा सेलाएकै छैन । माओवादीनिकट स्रोतका अनुसार विमला एमालेमै फर्किएपछि ६६ लाखको तनावले ओनसरी र सुदर्शन हैरानीमा रहेका छन् ।
उनी दाङबाट प्रदेशसभा ३ (ख) बाट नेकपा हुँदा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार केशराज शर्मा आचार्यलाई ५ हजार १ सय ४ मतअन्तरले पराजित गर्दै प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएकी हुन्।